August 16, 2016 – Waxaa dalka Koonfur Afrika lagu booby dukaamo ganacsato Soomaali ah ku lahaayeen xaafadda Strand ee hoos timaado magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika.
Weerarkan loo gaystay ganacsatada Soomaalida ayaa yimid ka dib markiiay goobtaasi ay soo weerareen dad Caraysan oo rabshado sameynayey, waxaana sidoo kale rabshadahan lagu gubay gaari uu watay mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida.
Dadka boobka geysanayey ayaa ka careysnaa dil ganacsade Soomaali ah uu kula kacay mid ka mid ah dadka degaanka oo uu muran dhex-maray, taasoo keentay in shacabku ay bilaabaan banaanbax ay uga soo horjeedaan dukaamada Soomaalida.
Ganacsatada Soomaalida ee lagu boobay degaankan ayaa ku noola halkaasi tobaneeyo sano, waxayna sheegeen inuu soo gaaray khaasare dhaqaale oo aad u baaxadweyn.
Xaalada deegaankaasi ayaa iminka ah mid dagan, waxaana jira kulamo u socdo gudi ka tirsan ganacsatada Soomaalida, odayaal ka socda dadka degaanka iyo maamulka deegaanka, waxaana la filaya in xal laga gaaro dhibaatooyinkan dhacay.
August 16, 2016 tuugahaladilo2015